puFmylESifh jrefrmhvlaerIb0 aqG;aEG;csufrsm; (6)
Results 11 to 20 of 999
Thread: [mm]puFmylESifh jrefrmhvlaerIb0 aqG;aEG;csufrsm; (6)[/mm]
07-09-2012 07:35 AM #11
Thanked 1,841 Times in 125 Posts
Originally Posted by frodofidi
....qdkawmh 1st September aemufydkif;a&mufvmwJh olawGqdk 'D criteria topfeJY avSsmuf&rSmjzpfjyD;? t&if DP &xm;jyD;om;olawGtwGufu EP holder tvkyfrajymif;rcsif; oloufwrf;wdk;vdkY &aeoí DP vnf; oufwrf;wdk;ay;r,faygh/
vuf&SdtvkyfrSm qufvkyfaeoa&TYawmh quf&aer,fhoabmaygh/
tMuHuawmh ykdifyAsm;/ rSDcdkta&twGufvnf; avQmhcsEdkifr,fhtjyif tykdqktjzpf EkdifiHjcm;om;awG vcwdk;rSmudkvnf; xdef;csKyfvdkufEdkifw,f/
vcwdk;awmif;r,frMuHeJY? ydkufqHydk&atmif tvkyfav;bmav;ajymif;r,frMuHeJY/ rdef;reJYuav; tdrfjyefoGm;&r,f? bmrSwfaevJ/
vuf&Sd Q1 holder awG&JY tvkyf&SifawGtwGufawmh wu,fh owif;aumif;yJ/
2323, Alley Cats, barronbala, blooddiamond6, daylight, Deadmanwalking, exotic, frodofidi, KaungKinPyar, laramt, MNO.BN, Oscar Htun, pieces, Ravan, roger, staraye, sunny007, tiptop, ZuKa
07-09-2012 12:54 PM #12
taraum tazaum Spass awGeJY tvkyfvkyfaew,f/4ESpfcGJt&G,f uav;udk ac: xm; csifw,fqdk&if b,fvdkrsdK;ac:vdkY&vJ tMuHav; ay;MuygOD;cifAs/
uav;udk rlMudKxm;jyD; ac: xm;r,fqdk&ifvnf; student pass u ck cufw,f olUtodwpfa,muf vifr,m;2a,mufavQmufwm r&bl;vdkY oli,fcsif;wpfa,mufu ajymxm;wmvJ &dSaeawmh odyfrarQmfvifh&Jbl;/
rdb ESpfa,mufpvHk;u avmavmq,f Spass dependent vpmudk r&Muao;awmh Dependent avQmufzdkY tqifrajyvdkYyg/
usaemfh&Hk;rSm usaemfh olaX;u ndSvkyfay;&if&ayr,fh Finance Manager olwdkYtrsdK;tzGm;MuD;u uefYvefYuefYvefYvkyfwmaMumifh r&yJ jzpfaewmvJ ygw,f/
uav;ac:zdkY tqifrajy&ifawmh aemuf ESpfavmufqdk jyefawmhr,fqHk;jzwfxm;w,f/ tvkyfawGuvnf; avQmuf&if Singaporean or PR r[kwf&if vpmu rsm;rsm; ray;csifMubl;/
Mumawmhvnf; udk,fhbmom tvmaemufusvdkY PR awG rkefYvdka0wJhtcsddefrSm r&vdkufwm tjypfwif&rvdkvdkjzpfaejyD/ tvkyfxJrSmawmif udk,fu olwdkYxuf vpmrsm; &mxl;u executive level &dSwmudk udk,fhavmuf level r&dSwJh PR vkyfwJh olawG&JY txifao; tjrifao; qufqHwm cH&ao;w,f/
barronbala, batoe, blooddiamond6, botherband, christine, einda74, Grace, jim beam, Kaung Lay Luck, KaungKinPyar, KoSai11, La Goon, mrlynn, paytue, petit, pieces, pinkladylay, Ravan, richtt, tiptop, Warez, zoey
07-09-2012 02:31 PM #13
အကောင်းဆုံးအကြံပေးရရင်တော့ ကိုဒေးလိုက် အမ်အိုအမ်ကို appeal letter တင်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ အကြောင်းပြချက်ကလည်း သိပ်အဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး မိဘနှစ်ပါး စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး 'အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သား ကို' စောင့်ရှောက်ဖို့ရာ ခွင့်ပြုပေးစေလိုပါကြောင်း ဆိုပြီးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုဒေးလိုက်ကို တစ်ချက်အကြံပေးချင်တာက လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး အလုပ်လုပ်နေတာမို့ ကလေးကိုထပ်ပြီး ခေါ်တဲ့အခါမှာ သတိပြုရမှာက ကလေးကို ဘယ်လိုအချိန်ပေးမှာလဲဆိုတာပါဘဲ။ နောက်ပြီး ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စရိတ်ဟာ လူကြီးတစ်ယောက်နီးပါး ဒါမှမဟုတ် လူကြီးတစ်ယောက်စာလောက် ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။
ငွေရေးကြေးရေးက သိပ်အရေးမကြီးပေမယ့် ကလေးကို အချိန်ပေးပြီး ဘယ်လိုထိမ်းကျောင်းမလဲဆိုတာက သာလို့အရေးကြီးတယ်။ အိမ်မှာ ထားခဲ့ရအောင်ကလည်း အကူလူမရှိဘဲ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်၊ အိမ်ကူခေါ်ဖို့ရောစဉ်းစားကြည့်တော့ အိမ်ဖော်လစာ နှင့် အိမ်ဖော်လေဗီနဲ့တင် ၇၀၀ လောက်အနည်းဆုံးကျမယ်။ ကလေးနဲ့ကို ကျောင်းပို့တယ်ထားဦး ကျောင်းမသွားခင် လုပ်ပေးရမှာရယ်၊ ကျောင်းဆင်းရင် ကြိုပေး လုပ်ပေးရမှာရယ် အိမ်မှာထပ်လုပ်ပေးရမယ့် ဝေရာဝစ်စတွေရယ် အများကြီးရှိတယ် အကို။ လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကလေးကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပို့ဆိုရာမှာ မလွယ်ဘူးနော်။ နောက်ပြီး အကိုက မကြာခဏဆိုသလို ဗီယက်နမ်သွားရတော့ ကလေး နှင့် ကလေးမအေကျန်ခဲ့တဲ့အခါဘယ်လို စီမံမလဲ။
နောက်ပြီး အလုပ်ကိစ်တွေနှင့် နှစ်ယောက်လုံး စိတ်ဖိစီးမှုဒါဏ်ရှိနေနိုင်တယ်။ အားမနာတမ်းပြောရရင်တော့ဗျာ အဲဒီလိုအခြေနေမျိုးဖြစ်လာရင်ရော ကလေးနဲ့ဆို အဆင်ပြေပါ့မလားခင်ဗျာ။ အလုပ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်စိတ်မောမော ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနေပါစေ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ကလေးမျက်နှာလေးမြင်ရတဲ့အခါ အားလုံး မေ့ထားလို့ရတယ်ဆိုတာတော့ အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က ကလေးအဖေ တစ်ယောက်မို့ မိဘချင်း ကိုယ်ချင်းစားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ အထက်ပါအချက်တွေကို သေခြာပြင်ဆင်ထားစေချင်တာပါဘဲ။
ယထာဘူတာ ကျကျပြောရရင်တော့ အလုပ်ကိစ်စအရရော ငွေကြေးကိစ်စအရရော တည်ငြိမ်သွားပြီဆိုမှ ကလေးကိုခေါ်ပေါ့။ အလျှင်စလိုတော့ မလုပ်စေချင်ဘူး။ နောက်ပြီး ကျနော်ခုလိုပြောတာ စိတ်မဆိုးနဲ့ ဦး၊ ကျနော်တကယ်ကို မိဘချင်းကိုယ်ချင်းစာလို့ပြောတာပါ။
2323, Alley Cats, barronbala, batoe, blooddiamond6, botherband, christine, daylight, Deadmanwalking, einda74, exotic, fieldmarshal, frodofidi, Grace, hellocatcat, jim beam, kapale, Kaung Lay Luck, KaungKinPyar, KoSai11, koukou, LU SHAY, mgchaint, petit, pieces, Ravan, roger, rosyster, sunny007, ThunderHawk, tiptop, Warez, wasabi, weithet, zoey, ZuKa
07-10-2012 03:28 AM #14
Thanked 1,563 Times in 122 Posts
Setp 1 upjyD; vpm 4000 rS rdom;pk ac:vdkU &awmhr,f /
2323, cyborgc4, Grace, jsn_woo, KaungKinPyar, laramt, mrlynn, pieces, sunny007, Warez, zoey
07-10-2012 03:53 AM #15
Thanked 12,412 Times in 697 Posts
လောလောဆယ် PR လျှောက်တဲ့သူတွေ အခြေအနေ ဘယ်လို ရှိပါသလဲဗျ...။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူနဲ့ တူတူ လျှောက်တဲ့ တစ်ရုံးထဲ သမား ဖဦးထုပ်က Reject ထိပြီး သူကျတော့ ဘာစာမှ မလာသေးလို့ ရင်ခုန်နေတယ်တဲ့...။
လောလောဆယ် ဂျက်ထိတာတွေ များနေတယ် ပြောတယ်။
အဲဒီ ဖဦးထုပ်က လုပ်သက် ၅ နှစ် လခ သုံးထောင်ကျော် လေးထောင်နီးပါး လို့ ဆိုပါတယ်။ အီးပီကနေ လျှောက်တာတဲ့...။
သူငယ်ချင်းလဲ အီးပီပဲ.. လခတော့ သူ့ထက်နည်းတယ်။ လုပ်သက်လဲ နည်းတယ်တဲ့..။
သိပ်မမျှော်နဲ့လို့တော့ သူ့ကို ချွေးသိပ်ထားတယ်။
2323, barronbala, Grace, jim beam, KaungKinPyar, mrlynn, pieces, Ravan, richtt, roger, sunny007, Warez, zoey
07-10-2012 04:20 AM #16
Cadet Cupid no more wasted.
Thanked 7,044 Times in 441 Posts
မိန်းမယူပြီးရင် DPလျှောက်နိုင်မယ့် မျှော်လင့်ချက်လေးလည်း ဝေးပြီပေါ့ ... အရင်က မိုက်ခဲ့သမျှ .. အခုတော့ စလုံးမှာတောင် မလွယ်ပါလား ...
ကျန်တော့ ကောင်မလေးက2လပိုင်းလောက်က spass rejected ထိပါတယ်... အလုပ်ရှုင်က အူကြောင်ကြားလုပ်တာလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်...
ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိပါဘူး ကျောင်းလျှောက်တောင် ၆လလောက် ခွာပြီးလျှောက်လို့ City Hall က အေးဂျင့်က ပြောလို့ အခုစောင့်နေပါတယ်။
မေးချင်တာ က ကျောင်းပါ ... ပိုက်ဆံ လည်း သိပ်မများပဲ stay အတွက် အဆင်ပြေမဲ့ကျောင်းလေးတွေ သိရင် ကူညီကျပါ။
ACCA တော့ မတတ်တော့ဘူးစဉ်းစားထားလို့ ... အခု စုံစမ်းထားတဲ့ သင်တန်းက ၆လ certificate course ကို ၃၀၀၀ လောက် ကျမယ်ပြောပါတယ်။
stay အတွက်ပဲမို့ ဒီ့ထက်သက်သာနိုင်မဲ့ ကျောင်းများရှိရင် ပြောကြပါဦး ။ ။
2323, barronbala, Grace, jim beam, KaungKinPyar, richtt, sunny007, Warez
07-10-2012 11:05 AM #17
pvHk;u tpfudkwdk.udk ADZmavSsmufwmeJ.ywfowfjyD;ar;yg&ap/
uRefawmfoli,fcsif;u Spass eJ. tvkyfvkyfaeolwpfa,mufyg/ tJ'golu ol.rdbawGudk pifumyluae ol. Spass eJ. E-visa avSsmufay;vdk.&Edkifrvm;?
yDtm&SdjyD;ol wpfa,mufa,mufua&m E-visa avSsmufay;vdk.&ygovm;?
CityHall udkoGm;ar;awm. tJ'Duat;*sif.awGu E-visa udk tpdk;&u ydwfvdkufvdk.rvkyfay;awm.bl;ajymw,f/
aemufuRefawmfodcsifwmu CityHall at;*sif.awG E-visa avSsmufay;cJ.wkef;u b,favmuf,lcJ.jyD; tcsdefb,favmufjumcJ.ovJqdkwm avSsmufzl;wJ. olrsm;&Sd&if tjuHay;ay;juyg/
barronbala, Grace, justkidding, ka hta ma, KaungKinPyar, mrlynn, Oscar Htun, richtt, sunny007, ThunderHawk, Warez
07-10-2012 11:56 AM #18
စလုံး ICA ရဲ့ ဝက်ဆိုက်က အီးဗီဇာက မပိတ်ပါဘူး။ https://www.psi.gov.sg/NASApp/tmf/TM...ue&Reload=true မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပီအာ သို့မဟုတ် စလုံး နိုင်ငံသားရဲ့ စပွန်ဆာလိုပါတယ်။ Spass, EP ကိုင်ထားတဲ့လူတွေအနေနှင့် တိုက်ရိုက်လျှောက်လို့မရပါ။ ပီအာ နှင့် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ စပွန်ဆာဆိုပေမယ့်လို့ အွန်လိုင်းဗီဇာလျှောက်ဖို့အဓိက လိုတာက ပီအာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားရဲ့ Singpass လိုတာပါ။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ မေးထားတဲ့အတိုင်း ကွက်လပ်ဖြည့်တာပါ။
အားမနာတမ်းပေါင်းသင်းတဲ့ ပီအာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းရှိရင်တော့ ဟေ့ကောင် မင်း Singpass ခဏပေးကွာ ငါဗီဇာလျှောက်ချင်လို့ဆိုပြီး ပြောသုံးလို့ရရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဗီဇာကျပြီးပြီဆိုတာနဲ့ မိတ်ဆွေကို Singpass ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပေါ့။ တော်ရုံခင်မင်မှုနဲ့တော့ Singpass ပေးသုံးမယ်မထင်။
ကျနော်ကတော့ အဲလိုဘဲလုပ်တယ်။ အွန်လိုင်းဗီဇာအတွက် စလုံး ၃၆ ဒေါ်လာလားမသိသွင်းရတယ် (သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး) ။ အိမ်ကစက်မှာလုပ်တဲ့အခါ သိပ်ကြာပြီး အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ICA အဆောက်အုံ ပထမထပ်က အီးလော်ဘီမှာလုပ်တာ ၁၀ မိနစ်ဘဲကြာတယ်။ တက်စီနဲ့သွားတာမို့ အသွားအပြန် စလုံး ၂၀ ကုန်သွားတယ်။ စုစုပေါင်း ၆၀ လောက်ကုန်သပေါ့။
နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်က မဇံရဲ့ (Botazan) ရဲ့ Vivo Ticketing ကိုဘဲ လျှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အပြီးစီး ယူအစ်ဒေါ်လာ ၅၀ ကျတယ်။ တန်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လျှောက်ရင် ကရိကထများလို့။ ဒီတော့ ကိုရင့်သဘောပါဘဲ။ မဇံတဲ့ လိပ်စာက
Vivo Air Ticket Sales Center
Room G3, Yathar Condo
Mahabandoola Street, Yangon
badinf, barronbala, Black Xenon, botherband, Deadmanwalking, Grace, hellocatcat, jim beam, jsn_woo, ka hta ma, KaungKinPyar, La Goon, mgchaint, Oscar Htun, pieces, richtt, tiptop, Warez, zaw005
07-10-2012 02:10 PM #19
Noble Contributor Wizard Cupid Meh!
Thanked 36,587 Times in 1,557 Posts
t&ifu pvHk;rSm avQmufwkef;uawmh pvHk; 60-70 ay;&ygw,f/ ADZmyg wGJvkyf&if avQmhay;w,f/ Mumcsdefu olwdkYajymwmu oHk;&ufavmufajymayr,fh ESpf&ufavmufeJY &ygw,f/ tckawmh rodawmhygbl;/
badinf, barronbala, khanhlaing, Oscar Htun, tiptop, Warez, zaw005
07-10-2012 02:24 PM #20
Thanked 742 Times in 45 Posts
yDtmrdom;pk &efukefrSmyJ yghpfydkUvJwm pvkH;udkvnf; rjyefvmao;bl;qdk&if Re-entry Permit udk pmtkyftopf eHygwfeJY ICA xJrSmavQmuf&w,fvdkY ajymoHMum;bl;w,f? tJvdkvkyfvdkY&&if Link av;rsm; wpfpdwfavmuf od&ifvrf;nTefay;ygvm; aemuf pmtkyfvJNyD; b,favmuftawmftwGif; avQmuf&wmvJrodbl;
Last edited by Bainmote; 07-10-2012 at 02:34 PM.
KaungKinPyar, khanhlaing, Oscar Htun, Warez, zaw005